पीवीसी क्रिस्टल चप्पल चप्पल एकमात्र जुत्ता मोल्ड
PCU क्रिस्टल चप्पल चप्पल मोल्ड
पीवीसी एक बहुमुखी सामग्री हो कि धेरै सम्भावित अनुप्रयोगहरु प्रदान गर्दछ, यी शामिल छन्; विन्डो फ्रेम, ड्रेनेज पाइप, पानी सेवा पाइप, चिकित्सा उपकरण, रगत भण्डारण झोला, केबल र तार इन्सुलेशन, लचीला फर्श, छत झिल्ली, स्थिर, मोटर वाहन भित्री र सीट कभरिंग, फेसन र जुत्ता, प्याकेजि ...्ग ...
क्रिस्टल तल र रबर तल को पहनने प्रतिरोध फरक छ। रबर तल अपेक्षाकृत अधिक लुगा प्रतिरोधी र कुनै न कुनै जमीन बाहिर लगाउन को लागी उपयुक्त छ। क्रिस्टल तल को पहिरन प्रतिरोधी सम्पत्ति राम्रो छैन, त्यसैले यो घर भित्र लगाउन सबै भन्दा राम्रो छ। क्रिस्टल तल एक उच्च उपस्थिति छ, उपस्थिति परिवर्तनशील छ, र रबर तल कम रंग मिलान छ। यो एकमात्र सामग्री छनौट गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो छ कि तपाइँ एकमात्र र फरक लगाउने वातावरण को लागी तपाइँको आफ्नै आवश्यकता अनुसार उचित सूट।
1. बिभिन्न लुगा प्रतिरोध
क्रिस्टल तलवहरु सामान्यतया काठ को फर्श मा घर भित्र लगाउन को लागी उपयुक्त छन्। तिनीहरूको कम घर्षण को कारण, तिनीहरू लुगा प्रतिरोधी छैनन्। उनीहरुलाई घर भित्र लगाएर जुत्ता लगाउने समय बढाउन सकिन्छ। रबर एकमात्र अधिक लुगा प्रतिरोधी छ, त्यसैले यो बाहिर कुनै न कुनै जमीन मा लगाउन को लागी उपयुक्त छ।
2. फरक उपस्थिति
क्रिस्टल तल को उपस्थिति अधिक परिवर्तनशील र सुन्दर छ, र विभिन्न हस्तलेखन उच्च उपस्थिति संग छाप्न सकिन्छ। रबर soled स्नीकर्स कम रंग मिल्दोजुल्दो छ, र मिल्दो माथिल्लो क्रिस्टल एकमात्र बाट थोरै फरक छ, तर रबर एकमात्र सामग्री को एक किस्म छ, त्यसैले तपाइँ स्वतन्त्र रूपमा उपयुक्त सामग्री र एकमात्र को उपस्थिति छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
क्रिस्टल तल र रबर तलवहरु को आफ्नै फाइदा र हानि छ। यो तपाइँको आफ्नै लगाउने आवश्यकताहरु र स्नीकर्स को आकार को आवश्यकताहरु को अनुसार एक उपयुक्त एकमात्र छनौट गर्न को लागी सिफारिश गरीन्छ। क्रिस्टल soled स्नीकर्स सामान्यतया रबर तलवहरु भन्दा धेरै महंगा छन्।
मिलान मिसिन: KCLKA, KINGSTEEL, TIENKANG LIDA, बलियो, JIC, KINGMIN
अघिल्लो: पीवीसी हावा उडाउने ढाँचा
अर्को: रबर मोल्ड
उच्च एड़ी वी आकार पीवीसी क्रिस्टल मोल्ड
पुरुष चप्पल Airblowing जुत्ता मोल्ड Pcu Pvc
पुरुष चप्पल Airblowing जुत्ता मोल्ड Pcu Pvc मोल्ड
पीवीसी फ्लिप फ्लप मोल्ड प्रत्यक्ष निर्माता